Uqikelela njani iProjekthi yeWebhu elandelayo | Martech Zone
Uyiqikelela njani iProjekthi yeWebhu elandelayo
NgoLwesihlanu, Meyi 28, 2010 NgeCawa, Agasti 10, 2014 Douglas Karr
Iyakwenziwa nini ngu?
Lo ngumbuzo othi undikhathaza xa ucaphula iprojekthi. Ungacinga emva kokwenza oku iminyaka ukuba ndikwazi ukucaphula iprojekthi efana nomva wesandla sam. Akunjalo ukuba isebenza njani. Iprojekthi nganye intsha kwaye iya kuba nemingeni yayo. Ndineprojekthi enye eneentsuku ezingama-30 emva kwexesha ngenxa yotshintsho oluncinci olwenziwe yifayile ye- API khange sikwazi ukusebenza. Umxhasi undicaphukisile-ngokuchanekileyo-ndibaxelele ukuba kuya kuthatha iiyure ezimbalwa. Ayikuko ukuba ndixokile, kukuba andikaze ndiqikelele ukuba inqaku liza kuhliswa kwi API ukuba sasithembele kuye. Andinazo izixhobo zokugqibezela ukusebenza malunga nomcimbi (siyasondela, nangona!).
Andifuni ukuya kwelinye icala kwaye ndibiza iiyure endaweni yoqikelelo lweprojekthi, nangona. Ndicinga ukuba ukuhlawula iiyure kukhuthaza iikontraki ukuba ziye ngaphezulu kwexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Yonke iprojekthi ngoku ndihlawula omnye umntu iiyure azisebenzi. Bonke balibazisekile kwaye ndithotyelwe ngumsebenzi. Ngokuchasene noko, iiprojekthi endizihlawuleleyo umrhumo weprojekthi zingene ngexesha kwaye zigqithile kulindelo. Ndiyakuthanda ukugqitha kulindelo lwabathengi bam, nam.
Iimpazamo ezine eziya kuvuthuza uqikelelo lwakho olulandelayo:
Impazamo yokuqala: Bala ukuba kuya kukuthatha ixesha elingakanani ukwenza into efunwe ngumthengi. Akulunganga. Uyenzile impazamo yakho yokuqala kwaye waqikelela ukuba umthengi ucele ntoni, hayi le nto umxhasi wayefuna ngokwenene. Ezi zimbini zihlala zahlukile kwaye umthengi uya kuhlala efuna kabini kunesiqingatha sexabiso.
Impazamo yesibini: Khange uthathe ukulibaziseka kwabaxhasi. Yongeza ukulibaziseka kweeveki ezimbini kwiprojekthi kuba isebe labo le-IT alizukufumana ukufikelela okufunayo. Ndihlala ndizama ukuxelela abathengi, ukuba ufumana u "A" kum ngomhla othile, emva koko ndinokuhambisa. Ukuba awuyenzi, Andikwazi ukuzibophelela kuwo nawuphi na umhla. Itshathi yeGantt ayitshintshi ngomlingo, ndinabanye abathengi kunye nemisebenzi esele ihleliwe.
Impazamo yesithathu: Uvumele umxhasi ukuba akunike uxinzelelo kunikezelo lwangaphambili. Khange ubandakanye Ukuphatha iimpazamo kunye nokuvavanywa. Umxhasi wayefuna ukunciphisa iindleko ngoko bakuxelele ukuba uyenze nje. Impendulo engachanekanga! Ukuba umxhasi akahlawuli ukuphatha iimpazamo kunye nokuvavanywa, ke qiniseka ukuba uza kuchitha iiyure ezinde kwiziphene kunye nokulungiswa kwesondlo emva kokuba uye bukhoma. Ukuhlawulisa ngayo nayiphi na indlela-uza kuwenza umsebenzi ngoku okanye kamva.
Impazamo yesine: Izinto ezilindelweyo ziyatshintsha apha endleleni, ishedyuli iyonakala, izinto eziphambili ngokubaluleka ziyasuswa, kuvela iingxaki obungazilindelanga, abantu bajikile… Uhlala uza kuba mva kakhulu kunokuba ubulindele. Sukuvuma ixesha elifutshane phantsi koxinzelelo kumthengi. Ukuba ubunamathele kulindelo lwakho lokuqala, ngekhe ubenzile!
Kutshanje, siqalise ikhontrakthi kunye nenkampani apho sivumelane ngokuhlawulwa kweprojekthi kunye nenqanaba eliqhubekayo lenyanga lokuphucula kunye nokugcina. Siye sahlala phantsi saxoxa iinjongo kwaye zeziphi ezona zinto ziphambili kubo-kwaye azikaze zixoxe ngokujongana nomsebenzisi, uyilo, okanye naliphi na elinye iqhekeza. Sibeke usuku olubi 'lokuya kuphila' olwalunobundlongondlongo, kodwa uPat wayeqonda kakuhle ukuba iprojekthi inokuba phambili kwezinye izinto kunezinye. Sibethelele ukumiliselwa kwaye sele sisendleleni kuluhlu lwezincedisi. Okubaluleke ngakumbi, sonwabile sobabini.
Andibethisi ngqikelelo oluninzi kodwa isenzeka ngamanye amaxesha. Ngapha koko, ndikulungele ukubuyisela ikhontrakthi yamva nje kuba, emva kokusebenza kwiiprojekthi ezimbalwa nomthengi, ndiyazi ukuba nangona umthengi evumile kwiinjongo ezingacacanga, ngekhe bonwabe ngaphandle kokuba bazifumene. amatyeli alishumi exabiso lesivumelwano. Ndinqwenela ukuba ndibabone aba bantu ngaphambili. Bona imfuneko Ukuqeshisa izixhobo zabo ngeyure… ukungena kuqikelelo olusekwe kwiprojekthi kunye nabo ngumbulali.
Ndiqala ukufumana into efanayo neeprojekthi eziyimpumelelo esizizisileyo okanye esizenzileyo. Ininzi yayo ndiyifundile Uqeqesho lokuthengisa ngoncedo lomqeqeshi wam, uMatt Nettleton. Ndifumanise ukuba uninzi lwempumelelo yeeprojekthi zam sele iqalile ngaphambi kokuba ndityikitye umthengi!
Indlela yokubethela uqikelelo:
Zama ukuyifumana xa umthengi eyilindele. Lulindelo lwabo olubaluleke kakhulu. Unokufumanisa ukuba unonyaka ukugqiba lo msebenzi. Kutheni uqikelela iiveki ezi-2 ukuba bonwabile ngeenyanga ezimbini? Usengawugqiba umsebenzi kwiiveki ezi-2 kwaye udlule kuko konke okulindelweyo!
Zama ukuyifumana yintoni eyiyo kumthengi. Ukuba awukwazi ukufumanisa ukuba kufanelekile, ke khangela ukuba yintoni uhlahlo-lwabiwo mali. Ngaba ungayigqiba iprojekthi kwaye ugqithe kulindelo olusekwe kolo hlahlo-mali? Emva koko yenze. Ukuba awukwazi, yiyeke.
Chonga ukuba yintoni Injongo yeprojekthi yile. Yonke into engaphandle kwenjongo ingaphandle kwaye inokusetyenzwa kamva. Sebenzela ukuseta iinjongo kwaye ugqibezele loo njongo. Ukuba injongo kukufumana ibhlog yakho kwaye uyasebenza, yenza ibhlog yakho kwaye usebenze. Ukuba kukwakha umanyano oluthumela i-imeyile, yifumane ukuze ithumele i-imeyile. Ukuba ukunciphisa iindleko zokufumana, fumana iindleko phantsi. Ukuba kukuphuhlisa ingxelo, yenza ingxelo kwaye usebenze. Ubuhle buza kamva kwaye ukulungiswa kakuhle kunokuza ngendleko enkulu kunye nexesha elimdaka. Sebenzela kweyona nto ibaluleke kakhulu.
Sebenzela umva ukusuka inqanaba lakho lokugqwesa. Uninzi lwabathengi bam abandisebenzisi kwimisebenzi ephantsi, bafumana ixabiso lemali yabo ngokundibethela izinto ezinkulu kwaye bayazalisa ukugqiba umsebenzi olula. Ndiyabathanda abo bathengi kwaye ndijolise kubo bobabini ukugqitha kulindelo lwabo kwaye ndibanikeze Ixabiso elingaphezulu kunokuba lihlawulela. Ekupheleni kweeprojekthi zethu, sihlala singaphantsi kohlahlo-lwabiwo mali okanye sidlula kwiinjongo, kwaye siphambili kwiishedyuli. Bandinika igumbi elaneleyo lokugqitha kulindelo lwabo… ilula kanjalo.
Ndisafumana uxinzelelo lokunciphisa iirhafu zam kunye nokugqiba kwangoko, ndicinga ukuba umphathi ngamnye ucinga ukuba yile njongo yabo xa besebenza kunye neekhontraktha. Kubi kakhulu ukuba banamehlo amafutshane. Ndisandula ukwazisa abathengi ukuba amaxesha amafutshane kunye nemali encinci inefuthe ngqo kumgangatho womsebenzi abandiqeshele wona. Into emnandi ngokuhlawula ikontraka enkulu into ayixabisileyo kukuba uya kuhambisa… kwaye ungalindela ukuba azokuhambisa. Xa uqhubeka nokusika okanye ukubetha iikontraki zakho zife, sukumangaliswa xa nanye yabo isebenza. 🙂
Ndiphinde ndiphume ngalo lonke ixesha. Ixesha lokugqibela ukwenzeka, inkampani ikhethe isisombululo sethutyana esiza kuthi kufuneka siphinde siqhubeke nomthengi ngamnye. Amaxabiso am ayemalunga namaxesha ayi-1.5 ngexabiso, kodwa bendizakuyakha ukuze baphinde basebenzise usetyenziso nomthengi ngamnye. Umphathi omkhulu uye wandihleka xa endixelela ukuba “uonge malini” nomnye unokontraka (ndicebise ikhontraktha). Abathengi abane ukusukela ngoku, uya kuhlawula ngaphezulu kwamaxesha ama-3 iindleko zokuphumeza. Dummy.
Ndancuma, ndaye ndaya kwiklayenti lam elilandelayo ndonwabile, ndiphumelela ngakumbi kwaye ndinenzuzo.
tags: uqikelelo lweprojekthiUmda wexesha leprojekthiprojekthi yewebhuIprojekthi yewebhuIprojekthi yewebhusayithiUmda wexesha leprojekthi yewebhusayithiIxesha lewebhusayithi
Ukwenza Ityala lokuThengisa nge-imeyile
Imveliso: IRubrik "ekhawulezayo, enexabiso eliphantsi, elungileyo"
Meyi 29, 2010 kwi-6: 58 AM
Utshilo uDoug. Ndisasokola nale nto nam. Xa ndibuzwa ukuba ndingayifumana nini na iwebhusayithi, ndifunde ukuphendula, “oko kuxhomekeke kwindlela ophendula ngayo kuyo yonke into endiyicelayo.”
UHarry D Howe
Meyi 30, 2010 kwi-3: 58 PM
Ndiyayixabisa inyani yakho, Doug. Ndingongeza enye yezona ndlela zibalaseleyo- kukugcina unolwazi lomthengi kwaye ubonakale. Konke oku kuthatha inqanaba lokuthemba.